Somalimirror.net – Warar Ku Salaysan Xaqiiq iyo Xuuraansi
Posted on September 14, 2021 By Somalimirror No Comments on Qarax uu geystay naftii hure katirsan Al-Shabaab oo goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax aad u xoogan uu goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, kaas oo lala beegsaday maleeshiyaat ka tirsan DFS. Qaraxan oo uu fuliyey naftii hure ka tirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa ka dhacay naxaawiga xero Nacnac oo ku taalla degmada Wadajir…
Wararka Caalamka “Qarax uu geystay naftii hure katirsan Al-Shabaab oo goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho” »
Ciidamada Yugaandha Oo Lagu Weeraray Deegaanno Ka Tirsan Sh/Hoose.
Posted on September 12, 2021 September 12, 2021 By Somalimirror No Comments on Ciidamada Yugaandha Oo Lagu Weeraray Deegaanno Ka Tirsan Sh/Hoose.
Ciidamada Yugaandha ee qaybta ka ah shisheeyaha dalka kusoo duulay waxay saacadihii lasoo dhaafay xarakada shabaabul Mujaahidiin kala kulmeen weeraro kala duwan kuwaas oo lagula beegsaday deegaanno ka tirsan Sh/hoose. Weerarada oo ahaa kuwa jidgal oo gaarayay illaa 2 weerar waxay Mujaahidiintu siyaabo kala duwan ugu dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kuffaarta Yugaandha oo saad…
Wararka Caalamka “Ciidamada Yugaandha Oo Lagu Weeraray Deegaanno Ka Tirsan Sh/Hoose. ” »
Breaking News, Warbixinno
Akhriso Howlgalladii Ugu Dambeeyay Ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin
Posted on September 11, 2021 September 11, 2021 By Somalimirror No Comments on Akhriso Howlgalladii Ugu Dambeeyay Ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin
Ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ee ka howlgala wilaayaadka dhaca koonfurta dalka Soomaaliya waxay fuliyeen howlgallo siyaabo kala duwan loogu beegsaday ciidamada Shisheeye iyo kuwa Soomaaida. Howlgalka koowaad oo ahaa dagaal toos ah waxay ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ka samaysteen degmada Baardheere ee wilaayada Gedo. waxaana halkaas ka dhacay dagaal…
Wararka Caalamka “Akhriso Howlgalladii Ugu Dambeeyay Ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin” »
Posted on September 7, 2021 September 7, 2021 By Somalimirror No Comments on Taliban oo ku dhawaaqday dowlad cusub oo Islaami ah [akhriso magacyada].
Wadatashiyo dheer kadib ayay maanta gelinkii dambe Imaarada Islaamiga ah ku dhawaaqday xukuumad cusub taasi oo maamuli doonta dalka Afghanistan. Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid oo ah afhayeenka Taliban ayaa shir jaraa’id ku shaaciyay magacyada xukuumadda cusub. Dhammaan xubnaha xukumadda ayaa xubno ka ah xarakada Taliban waxayna ubadanyihiin saraakiil ciidan iyo mas’uuliyiin katirsanaa Xarakada. R/wasaaraha dowladda Islaamiga…
Wararka Caalamka “Taliban oo ku dhawaaqday dowlad cusub oo Islaami ah [akhriso magacyada].” »
Posted on September 5, 2021 By Somalimirror No Comments on Saddex sababood oo ay dhici karto in loo dilay Ikraan Tahliil [Warbixin].
Waxa aad loogu qaadaa dhigayaa baraha bulshada gabadh lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax oo da’deeda lagu sheegay 23 sano, Ikraan waxaa shaqada sirdoonka u qorey taliyihii hore ee nabadsugidda Cabdillaahi Sanbalooshe gugii 2017. Sarkaaladdan geerideeda la xaqiijiyey ayaa ahayd qurbe joog intii aanay shaqada bilaabin, sidoo kale wax ay la shaqaysay xafiiska qolyaha xuquuqda bina…
Wararka Caalamka “Saddex sababood oo ay dhici karto in loo dilay Ikraan Tahliil [Warbixin].” »
Haweeney katirsan Milliteriga Maamulka Hir Shabeelle Oo Hiiraan Lagu dilay.
Posted on August 31, 2021 By Somalimirror No Comments on Haweeney katirsan Milliteriga Maamulka Hir Shabeelle Oo Hiiraan Lagu dilay.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha dhulkeena Soomaaliya ayaa ku waramaya in maxkamadda islaamiga ee gobolkaas ay xukun dil ah ku fulisay haweeney katirsan milliteriga maamulka Hir Shabeelle. Haweeyneydan oo lagu magacaabo Anfac Xuseen ayaa waxaa gacanta kusoo dhigay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabab, maanta ayaana fagaare ku yaala gobolka Hiiraan lagu toogtay. Maxaakiimta islaamiga…
Wararka Caalamka “Haweeney katirsan Milliteriga Maamulka Hir Shabeelle Oo Hiiraan Lagu dilay.” »
Posted on August 30, 2021 August 30, 2021 By Somalimirror No Comments on Mareykanka oo 12 qof Shacab ah ku dilay duqeyn ka dhacday magaalada Kaabuul.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeymo khasaara badan dhaliyay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Kaabuul ee caasimadda Afghanistan. Ugu yaraan 12 qof shacab ah oo ay kamid yihiin 6 carruur ah ayaa laxaqiijiyay in ay ku dhinteen duqeynta oo ka dhacay wadada xiriirisa garoonka diyaaradaha caalamiga Kaabul iyo magaalada caasimadda…
Wararka Caalamka “Mareykanka oo 12 qof Shacab ah ku dilay duqeyn ka dhacday magaalada Kaabuul.” »
Ciidamada Yugaandha Oo Lagu Weeraray Koonfurta Soomaaliya.
Posted on August 30, 2021 By Somalimirror No Comments on Ciidamada Yugaandha Oo Lagu Weeraray Koonfurta Soomaaliya.
Warar dheeraad ah waxay kasoo baxayaan weerar jid-gal ah oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan shisheeyaha gaar ahaan kuwa Yugaandha iyo ciidamada dowladda lagula eegtay deegaanno ka tirsan wilaayada Sh/hoose ee dhacda koonfurta dalka Soomaaliya. Weerarka ugu horreeya oo ahaa kammiin ay diyaariyeen ciidamada shabaabul Mujaahidiin waxa uu qabsaday kolonyo ciidamo saliibiyiin ah…
Wararka Caalamka “Ciidamada Yugaandha Oo Lagu Weeraray Koonfurta Soomaaliya.” »
Sarkaal katirsanaa Sirdoonka dowladda oo Howlwadaag lagu dilay.
Posted on August 30, 2021 August 30, 2021 By Somalimirror No Comments on Sarkaal katirsanaa Sirdoonka dowladda oo Howlwadaag lagu dilay.
Xoogag hubaysan ayaa maanta duhurkii degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ku dilay sarkaal katirsanaa sirdoonka dowladda Federaalka. Sida ay wararku sheegayaan weerar qorshaysan oo ka dhacay Suuqa Bakaaraha ayaa sababay dhimashada sarkaal muhiim u ahaa sirdoonka dowladda Federaalka ee Nabad sugidda loo yaqaan. Goob joogayaal ayaa sheegay in daqiiqado kadib ay goobta…
Wararka Caalamka “Sarkaal katirsanaa Sirdoonka dowladda oo Howlwadaag lagu dilay.” »
Caawa waa Habeenkii guusha,
Posted on August 27, 2021 August 30, 2021 By Somalimirror No Comments on Caawa waa Habeenkii guusha,
Garoonka dayaaradaha Kabul waxa hadda iskuugu soo baxay kumanaan dad ah oo ay wujuuhdooda ka iftiimayso farxad aad u weyn iyo iftiin Ayagoona u dabbaal degaaya maalintooda guusha, America iyo Xulufadeeda ayaa caawa Afghanistan kadhamaaday. Ammaanka Kabul-na si dhamastiran caawa waxa ula wareegay ciidamada Imaarada Islaamiga ee Afghanistan Allah weyn ninkii aaminaa AWOOD leh ummad…
Wararka Caalamka “Caawa waa Habeenkii guusha,” »